ary voalaza fa misy vondrona firenena vahiny matanjaka ao ambadiky ny firotsahany, ka anisan’ny mivoy ny tsy hirotsahan’ireo kandida matanjaka amin’ny alalan’ilay “ni...ni…” ireo vondrona mpanohana ireo. Tsikaritra ho ratsy fifandraisana amin’ny HVM ny tenany ankehitriny ary efa manomana tsikelikely ny lalan-kivoahany ao anatin’izao fitondrana izao. Mivoaka ihany koa ny vaovao fa hisy ny fanovana ny mpikamban’ny governemanta ato ho ato, ka minisitra 20 no mety hiala amin’ny toerany ary ireo tena olona akaiky ny filoha, izany hoe ho HVM hiringiriny no handrafitra izany, ka anisan’ireo hodakana i Roland Ratsiraka. Olona nanenjika izao fitondrana izao ny tenany tamin’ny fihodinana voalohan’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013, ary tsy ananan’ny HVM fitokisana feno fa setrin’ny fanohanana an-dRajaonarimampianina nandritra ny fihodinana faharoan’ny fifidianana no nampidirana azy tao. Efa nilaza ho manana dosie mikasika ny afera maloton’i Hery Rajaonarimampianina sy ny fanjakana izy saingy nangina hatreto, rehefa tafiditra tanaty fitondrana. Ho sahin’ity mpanao politika ity ve ny hamotsipotsitra ny afera maloto nisy nandritra ny 3 taona nitondran-dRajaonarimampianina sy hamoaka amin’izay ilay nambara ho dosie maloto tamin’ny taona 2013 ? Mitifitra lanitra mba hahavoazana tendrombohitra amin’ny fivarotana vato ho takalon’ny seza toy ny tamin’ny 2013 ve ny tenany sa efa tena vonona ny handrombaka fahefana sy hifanandrina amin’ireo kandida azo hambara fa manana herijika kokoa noho izy ? Malaza ho tompon’ny afera izy ankehitriny ary re fa efa vonona amin’ny hoenti-manana amin’ny fifidianana noho ny vola efa voaangony. Voalaza ihany koa fa manana fahatokisan-tena noho ny fianteherany fatratra amin’ireo vondrona firenena maromaro handrotsaka azy sy miketrika ny fisakanana ireo mpifaninana hafa atahorana izy.